Layma's World: Blog သစ်ပင်
၂၀၀ရ ခုနှစ်…မေလ ကုန်ခါနီး ကပေါ့….
ဘာပင်လဲသိချင်ရင် ဒို့ ဥယျာဉ်မှာ ၀င်ကြည့်ပါ…..
ဥယျာဉ်လေးရဲ့ တည်နေရာ “www.???.blogspot.com ” မှာ…..တဲ့ ။
အဲဒီတုန်းက သူ့ သစ်ပင်လဲ ပျိုးသစ်စ….
အရောင်စုံတွေ ရောယှက်….label တပ်လျက်ပေါ့….။
ထူးဆန်းတဲ့ သစ်ပင်လေး …..
ပေးထားတဲ့ လိပ်စာတွေထဲ ဟိုဝင် ဒီထွက်…ဟိုမှာရှာ…ဒီမှာမေး….
လေးမ သစ်စေ့လေး ပျိုးခဲ့တယ်…..။
တချို့ က ရယ်ပြတယ်….တချို့ ကငိုကြတယ်….
တချို့ က တွေးတယ်….တချို့ ကဆွေးတယ်…..
အဖြူရောင်တချို့ …..အနီရောင်တချို့ နဲ့ ….
အပြာရောင်တချို့ လဲ ခြယ်ထားတယ်…..။
သစ်ပင်လေးရှိရာကို ခရီးသွားတွေ အမျိုးမျိုး…
တချို့ က တမင်လာတယ်….တချို့ က ကြုံလို့ လာတယ်….
တချို့ က မျက်စိလည်လမ်းမှား…..တချို့ ကမတော်တဆ….
တချို့ က လူမှုရေးအရ…..
(သူတို့ ဆီက) အပျော်တွေမျှ…..ခွန်အားတွေရခဲ့တယ်…..။
တချို့ ကရေလောင်းသွားလို့ ….တချို့ က ရေဖြည့်ခဲ့ကြတယ်….
တချို့ ကပေါင်းသင်….တချို့ ကမြေရှင်းပေးခဲ့ကြတယ်….။
သစ်ရွက်တွေ ၄၈ ပါ…..။ ။
Blog သစ်ပင် ဟာ Layma's world ဆိုတဲ့ blog လေးရဲ့ သမိုင်းကြောင်း...ဖြစ်စဉ်...ရပ်တည်မှု ဖြစ်သောကြောင့် သူငယ်ချင်းတို့ ရဲ့ မှတ်ချက်များကို Post နဲ့ အတူတင်ထားပါရစေ...။ ။
သန့် ဇော်မင်းက ဦးဦးဖျားဖျား.....
မမလေးလေးမရေ.... ဘာကြောင့် ဘလော့ရတယ် ဆိုတာလေးကို ဖြေသွားတာ... တမူထူးခြားစွာနဲ့ ကောင်းလိုက်တဲ့ ကဗျာလေးပါလား.. သစ်ပင်လေး ထာဝစဉ်ရှင်သန်လို့ ရောက်လာသမျှ ခရီးသွားတွေကို ပျော်ရွှင်မှုတွေ ပေးဝေနိုင်ပါစေ....
ဘလော့ဂ်သစ်ပင် ... နာမည်ပေးတတ်လိုက်တာ ...ဟုတ်ပါ့ဗျာ ... သစ်ပင်လေးလိုပဲ ... ရွက်သစ်တွေ ဝေလို့ ငြိမ်းအေးချမ်းမြပါစေဗျာ ... လာရောက် အရိပ်ခိုသွားပါတယ်ဗျို့ ...
အို သစ်ပင်ငယ် ...
သင်၏ အရှင် သင့်သခင်၏
မန်းချယ်ရီနှင့် 'မိ' သူငယ်ချင်း
မပိုမပီ ရွက်စာစီခဲ့ ။
ပြုံးကြည်ရွှင် ၏ ။
ပုံပြင် အတွေး ကိုင်းကလေးမှာ
တွေးစချိုရီ သာယာပေ၏ ။
သူ့စကားရွက် စုံဝဲလက်၏ ။
မိုးရွက်ဝေလို့ သီခဲ့သည် ။
ရွက် စိမ်း ၀ါ နဲ့ နီတြာ တင့်မော
ီရီညို မိုးစက် သက်ခဲ့တစ်ခါ
လက်ဖြာ နေခြည် ဆင်းခဲ့သည်ကြောင့်
ကြည်သာရွှင်မြ ရပေ၏ ။
လက်ကြယ် ရွက်သစ် ဝေဆင့်ပွင့်စေ ...
ခြွေသည့်ဆုမွန် အချွန်နှင့်မ ( အဲ ..ဟုတ်ပေါင်)
enics က တမင်လာတာတဲ့.....
Zorpia မှာစသိပြီးတော့အမရဲ့Blog သစ်ပင်လေးဆီကိုတမင်တကာလာခဲ့တာပါနော်နောက်လည်းဒီထက်မကPostတွေအများကြီးရေးနိူင်ပါစေ
Posted by Layma at 9:05 PM
ဘာကြောင့် ဘလော့ရတယ် ဆိုတာလေးကို ဖြေသွားတာ... တမူထူးခြားစွာနဲ့ ကောင်းလိုက်တဲ့ ကဗျာလေးပါလား..
သစ်ပင်လေး ထာဝစဉ်ရှင်သန်လို့ ရောက်လာသမျှ ခရီးသွားတွေကို ပျော်ရွှင်မှုတွေ ပေးဝေနိုင်ပါစေ....
ဘလော့ဂ်သစ်ပင် ... နာမည်ပေးတတ်လိုက်တာ ...
ဟုတ်ပါ့ဗျာ ... သစ်ပင်လေးလိုပဲ ...
ရွက်သစ်တွေ ဝေလို့ ငြိမ်းအေးချမ်းမြပါစေဗျာ ...
လာရောက် အရိပ်ခိုသွားပါတယ်ဗျို့ ...
ကိုသန့် ဇော်မင်းရေ….လေးမ ရဲ့ သစ်ပင်ကို ခုလိုရေလောင်းပြီး မြေသြဇာထည့်သွားပေးတာ ကျေးဇူးပါရှင်…..။
ဂျယ်ရီ….အရိပ်ခိုပြီး ဆုတောင်းပေးသွားတာ ကျေးဇူးပါ….အမြဲရေလာလောင်းတဲ့ သူရှိတော့ သစ်ရွက် အသစ်တွေထွက်တာပေါ့…..။
ရီညို မိုးစက် သက်ခဲ့တစ်ခါ
စာခရီးသည်……သင်၏သ၀ဏ်လွှာအား သစ်ပင်ငယ်မှ ဆက်သလာသောကြောင့် လေးမ လက်ခံရရှိပြီးသကာလ နှလုံးပီတိဂွမ်းဆီထိသကဲ့သို့ပီတိဝေဖြာ စိတ်ချမ်းသာရလေ၏…..စာခရီးသည်တစ်ယောက် ဘုန်းကြီးလို့အသက်ရှည်….. ကားစီးလို့တိုက်နဲ့ နေ နိုင်ပါစေသော်……။
Zorpia မှာစသိပြီးတော့အမရဲ့Blog သစ်ပင်လေးဆီကို
sparrow….တမင်လာတဲ့အတွက်ရော… ရေလောင်းသွားတဲ့အတွက်ရော အစ်မက အမြဲကျေးဇူးတင်နေပါတယ်…. zorpia မှာကတည်းက အစ်မရေးတဲ့ post တွေကို sparrow ကအမြဲဖတ်ပြီး comment ပေးခဲ့တာပဲ….။